‘प्रगतिशील साहित्यमा विचार र कलाको उचित संयोजन हुन्छ’ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘प्रगतिशील साहित्यमा विचार र कलाको उचित संयोजन हुन्छ’
‘प्रगतिशील साहित्यमा विचार र कलाको उचित संयोजन हुन्छ’
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता June 24, 2018	0 156 Views
प्रगतिशील लेखक संघ दाङ शाखाका अध्यक्ष भुवन देवकोटा (शरद) सँग समसामयिक साहित्यिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । – सम्पादक
प्रगतिशील लेखक संघको अध्यक्ष बन्नुभयो । बधाई छ । के छ भविष्यको योजना ?
धन्यवाद । दाङ जिल्लामा प्रलेस गठन भएको पच्चिस वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा प्रगतिशील साहित्यको उत्थान, विकास र संरक्षणका लागि धेरै महत्वपूर्ण कामह? भएका छन् । ती सबै कामबाट शिक्षा, अनुभव र प्रेरणा लिदै समय र आवश्यकता अनु?प थप नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोच बनाएको छु । वैचारिक र सांस्कृतिक पक्षलाई महत्वकासाथ उठाउँदै लेखन कलालाई विकास गर्दै लैजाने सोच बनाएको छु । यसका साथै विचार गोष्ठी र प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने योजना बनाएको छु । कार्यक्रमको पहिलो चरणमा नियमित बैठकमा सहभागी कार्यसमितिका सबै पदाधिकारीले अनिवार्य?पमा आफ्ना रचनाह? वाचित गर्नुपर्नेछ । वाचित रचनाको समीक्षा र समालोचना पनि उनीह?बाटै गरिनेछ । यसबाट रचना लेख्न हौसला प्रदान गर्नुका साथै समीक्षा गर्ने क्षमतालाई पनि विकास गर्दै लैजानेछ ।
तपाइँको साहित्यिक यात्रा झण्डै चार दशक पुरानो छ । विगतलाई फर्केर हेर्दा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ ?
विगतको मेरो साहित्यिक यात्रा गौरवपूर्ण रहेको मैले अनुभूत गरिरहेको छु । यसका साथै राजनीति र पत्रकारिताको यात्रा पनि उत्तिकै गौरवपूर्ण रहेको छ । पञ्चायती व्यवस्थाको राइँदाइँ चलिरहेको समयमा राजनीतिक कारणले पटक–पटक जेल बस्दाको समयमा लेखिएका रचनाह? पढ्दा अहिले पनि निराशा, कुण्ठा र खिन्नताह?लाई मनबाट बढारेर टाढा लैजान सघाउ पुग्ने गरेको छ ।
जनपक्षीय साहित्य अर्थात प्रगतिशील साहित्यका पक्षधर श्रष्टाह? सत्ताका लागि सधैजसो आँखाको कसिङ्गर बनिरहेका हुन्छन् । एकातिर यस्तो अवस्था रहेको हुन्छ भने अर्काेतिर जनताले आफ्नो आँखाको नानी जस्तै माया गरिरहेका हुन्छन् । मैले तपाइँलाई भनुँ चीनमा जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नको लागि प्रगतिशील साहित्यकारह?को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । ती साहित्यकारमध्ये लुसुनको नाउँ अग्रपंक्तिमा आउने गर्छ । तिनै लुसुनका रचनालाई कुनै समयमा चीनको समाजवादी राज्य व्यवस्थाले प्रतिबन्ध लगाइदिएको थियो । तर उनी आफ्नो लेखनधर्मबाट कत्ति पनि विचलित भएनन् । ?समा पनि गोर्की र सत्ता पक्षका बीच बेलाबखत असहजता उत्पन्न हुनेगरेको इतिहास हामी सबैले पढ्दै आएका छौं । जनताको आवाज लेख्ने बोल्ने हाम्रो मुलुकका प्रगतिशील कवि कलाकारह? वर्तमान समयमा पनि कुनै लोभलालचमा नपरेर स्वाभिमानका साथ आफ्नो सिर्जनाकर्मलाई अघि बढाउँदै आएका छन् । यसलाई मैले नियमित प्रक्रियाको रुपमा लिने गरेको छु । असल र खराबका बीचमा यो संसारमा हिजो पनि लडाइँ थियो । आज पनि छ र भोलिका दिनमा पनि चलिरहनेछ ।
अहिले साहित्यप्रति मानिसको रुचि घट्दो अवस्थामा रहेको छ । यसको कारण के होला ? समग्रमा प्रगतिशील साहित्यप्रतिको आकर्षण घट्नुलाई कसरी लिनुभएको छ ?
वास्तवमा भने हो समग्र?पमा नेपाली साहित्यकोे अवस्था सन्तोषजनक रहेको छैन । यसको अर्थ निराशाजनक छ भन्ने होइन । हिजो भन्दा आज अनि आज भन्दा भोलि अझ राम्रोको खोजी गर्नु स्वाभाविक हो । कतिपय अवस्थामा कतिपय कवि कलाकारमा लोभलालच बढ्ने गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा जोखिम मोलेर साहित्य सिर्जना गर्नु भन्दा पाउ मोलेर आफ्नो जीवनलाई सुविधाभोगी बनाउन लालायित हुने गरेको परिवेशलाई हामी सबैले बेहोर्दै आइरहेका छौं । कतिपय मान्छेहरुले खबरदार गर्नु भन्दा लम्पसाार पर्नुलाई जीवनको उपलब्धि ठान्ने गर्छन् । यसप्रकारको प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब हाम्रो साहित्यमा पनि पर्ने गर्छ । जोखिम मोलेर साहित्य सिर्जना गर्नेहरु स्वाभाविक?पमा थोरै हुन्छन् । जति छन् जनताको पक्षमा कलम चलाउँदै आएका छन् । उनीहरुका पाठक घटेका छैनन् । अर्काे वास्तविकता के हो भने कतिपय प्रगतिशील साहित्यकारह?ले कला पक्षलाई त्यति बढी महत्व दिएको पाइँदैन । उनीहरुले आफ्ना विचारलाई कलात्मकढंगले पाठकसामु पस्कन अलि बढी परिश्रम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । महिला अधिकार विरोधी र रुढिग्रस्त चिन्तनले भरिएको स्वस्थानी ब्रत कथालाई अहिले पनि कतिपय मान्छेहरुले निकै मन लगाएर पढ्दै आएका छन् । यसबाट हामी सबैले शिक्षा लिनैपर्छ । भन्नुको तात्पर्य के हो भने नराम्रो विचारलाई त कलाले सजाएर पढ्नलायक बनाउन सक्छन् भने हामीले राम्रो विचारलाई राम्रो र पठनीय बनाउन किन अझ बढी मेहनत नगर्ने ?
बजारउन्मुख साहित्य, कला र बिकाउ साहित्यको प्रभाव बढ्नुको कारण के होला ?
स्वाभाविक हो कि कतिपय मान्छेहरु विचार र सिद्धान्तदेखि टाढा रहन मन पराउँछन् । सोच्ने, चिन्तन गर्ने र जागरणका कुरा गर्ने भन्दा पनि हल्काफुल्का, हाहाहुहु र बढी चिन्तनमनन गर्नुनपर्ने विषयतिर मन जान थालेको मैले महसुस गरिरहहेका छु । बजारउन्मुख र बिकाउ साहित्य कलामा विचार हुँदैन । विचारले नै मान्छेलाई मान्छे जस्तो बनाउँछ । जीवन र जगतका विषयमा गंभीर हुन प्रेरित गर्छ । स्वाभिमान, परिश्रमी र अध्ययनशील बनाउँँछ । न्याय र स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिन सिकाउँछ । देश र जनताका भलाइका निम्ति काम गर्न मद्दत गर्छ । सोच्ने, चिन्तन गर्ने र परिश्रम गर्न अल्छी गर्नेह?को चटके र जादूगरका व्यवहार जस्ता लाग्ने बजा? कला साहित्यतिर आकर्षण बढेको भए पनि त्यो टिकाउ हुँदैन । मान्छेह?लाई वास्तविकतातिर नआई छुट्टी नै छैन ।
तपाइको विचारमा अबको प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ? यसका चुनौतीह? के–के हुन् ?
प्रगतिशील आन्दोलनलाई अघि बढाउनको लागि संस्थागत रुपमा एकजुट हुन आवश्यक छ । एक्लाएक्लै होइन संस्थागत?पमा वैचारिक र साँस्कृतिक आन्दोलनलाई साथसाथै लैजानु आवश्यक छ । त्यस्तो आन्दोलनले मात्र प्रगतिशील साहित्यलाई अघि बढाउन सकिन्छ । कसै कसैले भनेको सुनिन्छ कि साहित्य सबै गतिशील हुन्छन् । किन चाहियो प्रगतिशील साहित्य ? वास्तवमा मानव सभ्यताको विकास गतिशीलताबाट भन्दा प्रगतिशील सोचबाट हुँदै आएको छ । तर कसै कसैले प्रगतिशील साहित्य भनेको वामपन्थीह?को मात्रै हो । यस्तो साहित्य एकपक्षीय हुन्छ भनेर आलोचना गरेका हुन्छन् । यथार्थमा यस्तो होइन ।
सबै साहित्य गतिशील भए पनि साहित्य सबै प्रगतिशील हुँदैनन् । उदाहरणका लागि रातपछि अवश्य दिन आउँछ । यो सत्य हो । तर रातमा पनि काम गर्नुपर्ने भएको हुँदा मान्छेले दियालो, टुकी, पानस र लालटिन हुँदै अहिले बिजुली बत्तीको जमाना छ । यो प्रगतिशील कार्य हो । गर्मीको समयमा दिउँसोपख अति नै गर्मी भयो । साँझपख अवश्य शीतल हुन्छ । तर दिउँसो खपिनसक्नु गर्मी भएपछि पंखा चलाएर शीतल प्राप्त गर्नु प्रगतिशील कार्य हो । प्रकृतिको गतिलाई मान्छेले आफ्नो सुविधाको लागि प्रयोग गर्नु त्यो प्रगतिशील कार्य हो । गतिमा उपसर्ग लागेर प्रगतिशील शब्द बन्ने गर्छ । मान्छेको यही प्रगतिशील सोच र कार्य आफ्ना रचना मार्फत पाठकह?समक्ष पस्कनुलाई नै प्रगतिशील साहित्य भनिन्छ । हिजो पनि यस्तै चलेको थियो । आज पनि चलेकै छ । किन परिवर्तन गर्नुप¥यो र भन्नु यथास्थितिवादी र अल्छी सोचाइ हो । यस्तो सोचाइले समाजको उन्नति हुन सक्दैन । प्रगतिशील साहित्यका कार्यह? धेरै छन् । ती मध्ये मूल्य मान्यतामा आधारित सभ्य समाजको स्थापनाका लागि यथास्थितिमा परिवर्तन ल्याउनका लागि साहित्य सिर्जना गर्नु नै हो । यस्तो साहित्य सिर्जना गर्दा यथास्थिति र पुरातनवादी सोच नै चुनौतीको ?पमा अघि आउने गर्छन् । यसका साथै सत्तामा बस्ने कतिपय लाउकेह?ले जी हजुरी मन पराउने गर्छन् । तर कसैको जी हजुरी नगर्ने प्रगतिशील साहित्यलाई उनीह?ले देखिसहँदैनन् । साँचो अर्थमा प्रगतिशील साहित्य जनताको निम्ति लेखिने हुँदा यस्तो साहित्य कहिले पनि पराजित हुन सक्दैन । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बाँचुञ्जेल कुनै संघसंस्थाबाट पुरस्कार सम्मान पाएनन् । तर जनता र पाठकले उनलाई दिएको सम्मान अहिलेसम्मकै उच्च सम्मान रहेको छ ।
अरु थप केही भन्नु छ कि ?
कुरा त धेरै आइसकेका छन् । हामीले कुरालाई भन्दा व्यवहारलाई महत्व दिनुपर्छ । हामीकहाँ प्रगतिशील साहित्यको विकास प्रशस्त मात्रामा भएको छ । तर वामपन्थीहरुका पार्टीगत र गुटगत चिन्तनका कारण राम्रोलाई राम्रो भन्नेहरुको कमी महसुस गर्दै आइरहेको छु । आफ्नो पार्टीसँग सम्बन्धित या नजिकको छ भने नराम्रो भए पनि राम्रो छ भनिदिने । तर अरु पार्टीको नजिक छ भने राम्रोलाई पनि नराम्रो भनिदिने । उदाहरणका लागि भनौं कृष्णसेन इच्छुक र नेत्रलाल अभागीका रचना पनि यस्तै प्रवृत्तिको शिकार हुनुपरेको थियो । आज परिवेश बदलिएको छ । आशा गरौं अब यस्तो प्रवृत्ति नदोहारिएला । मैले तपाइँलाई भनिहालुँ कतिपय यस्ता मान्छेहरु यस्ता छन् कि उनीहरुले सधै हातमा तराजु लिएर हिडिरहेका हुन्छन् । कतिबेला आफूलाई ताक पर्छ त्यतिबेला मात्र यसको साहित्य राम्रो । यसको साहित्य नराम्रो भन्ने गर्छन् । हो, हामीहरु यस्तो प्रवृत्तिको विरुद्धमा सधै उभिनुपर्छ । आलोचनात्मक चेत हुनु नै प्रगतिशील साहित्यको चिनारी हो । अरुको दानापानी खाएर प्रगतिशील साहित्यलाई कदापि उँभो लगाउन सकिदैन । यतिबेला सुब्बा कृष्णलाल अधिकारी, नेत्रलाल अभागी र कृष्णसेन इच्छुकलाई सम्झनु सान्दर्भिक नै होला भन्ने ठानेको छु ।
विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा पत्रिका परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
Previous: वडा तहमा जाने बजेट बढाऊ
Next: लमहीको नीति तथा कार्यक्रम,बधिया भाले उत्पादन केन्द्रदे खि लमही नगर बनाउने अभियानसम्म
धारापानीलाई धामकै रुपमा विकास गर्न महोत्सव गर्दैछौं
तीन वर्षमा चौबिसै घण्टा खानेपानी
योजना कार्यान्वयनका लागि चार महिना थोरै समय होइन